म्युजिक भिडिओ 'रि-डिफाइन' गर्ने २६ वर्षीय निर्देशक :: Setopati
म्युजिक भिडिओ 'रि-डिफाइन' गर्ने २६ वर्षीय निर्देशक
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, असोज २५
निर्देशक नवीन चौहान। तस्बिरः प्रभाकर गौतम/ सेतोपाटी
लाखौंले मन पराएको 'तीनपाते' गीत लेखिनुअघि नै हँसिला-रसिला थिए नवीन चौहान। उसै उज्याला नवीनको मुहारको चमक पछिल्ला तीन महिनामा पाएको सफलताले अझै बढेको छ।
नहोस् पनि कसरी! यो अवधिमा उनले निर्देशन गरेका दुई गीतले पाएको माया र चर्चा लेखिसाध्य छैन। अहिलेसम्म नवीन निर्देशित 'के माया लाग्छ र' ले एक करोड ६४ लाख र 'तीनपाते' ले ७९ लाख हाराहारी युट्युब भ्यूज पाइसकेको छ। यी दुवै गीतमा टिकटक बनाउनेको संख्या लाखौं छ।
'आफैं मुस्काऊ मुसुक्क, जुन तारा टिपी कोही दिँदैन।'
संख्यात्मक रूपमा नवीनले निर्देशन गरेका म्युजिक भिडिओ धेरै छैनन्- 'सम्झनालाई', 'लुकिछिपी', 'बटौली', 'के माया लाग्छ र' र 'तीनपाते'।
पहिलो भिडिओ 'सम्झनालाई' बाटै सम्भावना देखाएका नवीनले दोस्रो भिडिओ 'लुकिछिपी' बाट दुइटा इमेज अवार्ड जिते। पछिल्लो काम तीनपातेलाई त उनले आम म्युजिक भिडिओभन्दा फरक देखिने गरी 'अ म्युजिकल फिल्म' नै भने।
दस मिनेट लामो तीनपातेको भिडिओ नवीनको फरक काम मात्रै बनेन, नेपाली म्युजिक भिडिओमध्येकै एउटा राम्रो कामका रूपमा दरिन पुग्यो। 'तीनपाते' हेरेर धेरैले उनलाई नेपाली म्युजिक भिडिओ 'रि-डिफाइन' गर्ने निर्देशक समेत भने।
२६ वर्षीय नवीन भन्छन्, 'तीनपातेलाई अरूभन्दा फरक देखिन मात्रै 'अ म्युजिकल फिल्म' भनिएको थिएन। यसमा एउटा छोटो फिल्म बनाउन लाग्नेजति समय, मिहेनत र लगानी परेको थियो।'
आफ्ना सबै कामभन्दा तीनपातेको सफलताले नवीन बढी सन्तुष्ट छन्। किनकी भावनात्मक रूपमा पनि यसमा उनी जोडिएका छन्। यसका परिवेश, पात्र र कथामा नवीन आफ्नै कहानी पनि मिसिएको बताउँछन्।
तीनपातेमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने मिलन खत्री उनका प्लस-टु पढ्ने 'जिग्री' यार हुन्, जो भिडिओमा छुर्पी व्यवसायीको भूमिकामा छन्। नवीन र मिलन आज पनि सँगसँगै छुर्पी व्यवसाय चलाइरहेका छन्।
गीतकै शीर्षक तीनपातेसँग पनि नवीनको साइनो गाँसिएको छ। नवीनले पाँचथरमा जन्मे हुर्केर इलामको चिया बगानका कान्लाहरूमा केही वर्ष बिताएका थिए। कलेज पढ्दा अर्ग्यानिक चियाको मार्केटिङ समेत गर्थे।
तीनपाते गीतले बालापनदेखि प्रेममा परेका दुई पात्रको निजी, पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धको कथा भन्छ। सँगै पुर्ख्यौली छुर्पी व्यवसायले आत्मनिर्भर बन्न सफल युवाको कथा भन्छ। जन्मथलोसँगको भावनात्मक नाता, परम्परागत पेसालाई आधुनिक समयअनुसार निरन्तरता दिँदा प्राप्त हुने स्वावलम्बनको कथा भन्छ।
भिडिओमा नवीनले कलात्मक रूपमा आफ्नै गाउँठाउँ, परम्परागत पेसा र मौलिक सीपप्रति माया दर्शाउन मिहीन काम गरेका छन्। दर्शकले तीनपातेको यो अन्तर्यलाई सराहना गरिँदिँदा उनी औधी खुसी छन्।
भन्छन्, 'आफ्नो मननजिक रहेको कथा दर्शकको मननजिक पुग्दा कसलाई खुसी नलाग्ला र!'
नवीनका पाँच वटै भिडिओ आर्टमान्डुले निर्माण गरेको हो। अडिओ-भिडिओ सम्बन्धी काम गर्ने प्रोडक्सन हाउस आर्टमान्डु, नवीनले गायक तथा संगीतकार अंकितबाबु अधिकारीसँग मिलेर स्थापना गरेका हुन्। सन् २०१२ मा शिल्पी थिएटरमा प्रदर्शन भएको कुमार नगरकोटीलिखित 'कोमा' नाटकमा काम गर्नेबेला यी दुईको भेट भएको थियो।
नवीनका अनुसार, दुई वर्षअघि आर्टमान्डु खोल्दासम्म उनी व्यवस्थापन पक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्ने सोचमा थिए।
'तर परिस्थितिले निर्देशन गर्नैपर्ने भयो,' उनी भन्छन्।
सानैदेखि फिल्म हेर्न मरिहत्ते गर्ने, इलाममा प्लस-टु पढ्दा नाटक लेख्ने–खेल्ने नवीन कला क्षेत्रमै करिअर बनाउन चाहन्थे। काठमाडौं प्रवेश गर्ने बेलासम्म उनलाई नाटक खेलेरै पेट पाल्ने आत्मविश्वास थियो।
भन्छन्, 'तर कला क्षेत्रमा टिक्नु सोचेजस्तो सजिलो रै'नछ। सुरूदेखि जागिर खान मन नलाग्ने, व्यवसायतिर लागेँ।'
इलाममा प्लस-टु सँगै पढेका उनका केही साथी चिया र छुर्पी व्यवसायमा सक्रिय थिए। तिनैमध्ये केहीसँग मिलेर नवीन छुर्पी व्यवसाय गरिरहेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छुर्पी निर्यात गरिरहेका नवीन आर्थिक आधार मिलेकैले एउटै भिडिओमा छ महिना खर्चेर काम गर्ने छुट पाएको बताउँछन्। नेपालको सन्दर्भमा कलाकारले आफ्नो लागि सुहाउँदो वातावरण बनाउन आफैं मिहेनत गर्नुपर्ने उनको मत छ।
'हाम्रो कला क्षेत्रमा मिहेनत नगर्ने तर आफूलाई आदर्श देखाइ ऊर्जाशील समय फेक संघर्षमा बिताउने धेरै छन्। मचाहिँ भोक र आदर्शलाई ग्लोरिफाइ गर्नु साटो समय सदुपयोग गर्नतिर लागेँ।'
व्यवसाय गरे पनि रगरगमा कला भएका उनलाई ढिलोचाँडो यो क्षेत्रमा फर्किनु नै थियो।
'कला र व्यवसाय दुवै क्षेत्रको अनुभव मिसाउने कामबारे अंकितसँग आर्टमान्डु खोल्ने कुरा मिल्यो,' नवीन भन्छन्। आर्टमान्डुलाई कला–व्यवसायको संगम बनाउने सोच राखे पनि सुरूआती दिनमा उनीहरूले सोचे जसरी काम आएन।
काम नपाइरहेका बेला अंकितले नवीनलाई आफ्नो गीत 'सम्झनालाई' निर्देशन गर्न आग्रह गरे।
'त्यतिबेलासम्म निर्देशक बन्ने मुड आइसकेको थिएन। आफूले खोलेको संस्था जोगाउन पनि अंकितको कुरा मान्नै पर्‍यो,' उनी सुनाउँछन्।
करबलले अंकितको कुरा माने पनि नवीन शून्यमा थिएनन्। उनले त्यसअघि नै कयौं स्क्रिप्ट लेखन र भिडिओ बनाइसकेका थिए जुन आफैंलाई चित्त नबुझेर थन्काएका रहेछन्। अंकितले नवीनको यही पृष्ठभूमि बुझेर आग्रह गरेका थिए।
धेरै नेपाली म्युजिक भिडिओमा देखिने पात्रहरूको सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि खुलाइएको हुँदैन। उनीहरू नेपाली समाजका नभई अर्कै ग्रहका मानिसजस्ता देखिन्छन्। दर्शकको दैनिक जीवन भोगाइ र भिडिओका पात्रको जीवनमा तालमेल भेट्न हम्मेहम्मे पर्छ।
नवीनलाई फरक भिडिओमा उस्तैउस्तै देखिने हुलिया, परिवेश र नृत्य देख्दा चित्त बुझ्थेन। समाजको अनुहार खोज्थे, तर भेट्थेनन्।
'कलाकारको दायित्व भ्रामक संसार सिर्जना गर्ने नभई आममान्छे र समाजको कथा भन्नु हो। तर हाम्रा धेरै भिडिओ वा फिल्ममेकरले कस्तो समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने कला देखाइरहेका छौं भन्नेबारे सोचेको पाइँदैन,' उनी भन्छन्, 'मैले जुन परिवेशको कथा भन्ने हो त्यही अनुसार पात्र र एम्बियन्स सिर्जने प्रयास गरेँ।'
पहिलो म्युजिक भिडिओ 'सम्झनालाई' मा उनले ब्राह्मण पुजारी र नेवार केटीबीचको प्रेमलाई रोचक प्रस्तुति दिए। ती दुई पात्रको सांस्कृतिक पृष्ठभूमिअनुसारका दृश्य कथा काठमाडौंको परिवेशमा खिचेका थिए। सानै समूहबाट भए पनि उनले सकारात्मक प्रतिक्रिया पाए।
उनी भन्छन्, 'पहिलो भिडिओ बनाउँदा प्रस्तुतिमा आफ्नो शैली दिन सक्छु कि भन्ने प्रयास गरेको थिएँ। त्यसैबाट काम गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढ्यो।'
त्यसपछिका हरेक भिडिओले उनको आत्मविश्वास बढाइरहेको छ। आफ्ना हरेक कामबाट सिक्दै, कमजोरी सच्याउँदै नयाँ काम पुरानोभन्दा अझ राम्रो बनाउने बाटोमा सफल भइरहेका छन्।
पहिलो भिडिओमा उनले आफ्नो कथा भन्न सिके। दोस्रो 'लुकिछिपी' मा उनले प्रस्तुतिसँगै भिडिओमा मसिना डिटेलसहित काम गर्ने प्रयास गरेका थिए। अवार्ड समेत जित्न सफल यो भिडिओबाट उनी सन्तुष्ट भए पनि लामो हुँदा सम्पादनक्रममा धेरै अंश काट्नु परेको थियो।
यो कामले उनलाई भिडिओ 'कम्प्याक्ट' हुनुपर्ने कुराको महत्व सिकायो। चौथो भिडिओ चर्चित गीत 'के माया लाग्छ र' मा पछि यही बेला खिचिएका फुटेज जोडेर उनले 'लुकिछिपी' को प्रिक्वेल बनाए।
तेस्रो भिडिओ 'बटौली' मा भने उनी सबै कुरा पहिला सोचेजसरी नै उतार्न सफल भएको बताउँछन्। त्यति हुँदाहुँदै बटौली सार्वजनिक भएपछि भिडिओले खासै प्रभाव जमाउन सकेन कि भन्ने खट्किएकै थियो। प्रस्तुति, कथा वाचन, सिनेमाटोग्राफी लगायत प्राविधिक हिसाबले समेत चुस्त भिडिओ बनाउने उनको धोको पूरा भएको थिएन।
तीनपातेको कथा, प्रस्तुति, संगीत, रङ र सन्देशसम्म संयोजन मिलेको गीति फिल्म बनेको उनको विश्वासलाई दर्शकको मायाले पनि सकारेको छ।
भन्छन्, 'नेपाली चिया र छुर्पीको स्वादजस्तै नेपाली भिडिओ वा फिल्मको स्वाद पनि अर्ग्यानिक हुनुपर्छ।'
नवीन कलात्मक प्रयोगभन्दा सरल प्रस्तुतिमा जोड दिन्छन्। सरल प्रस्तुतिमा जोड दिने उनको आनीबानी र सोच पनि सरल छ। उनलाई काम होस् वा दैनिक जीवन, बढाइचढाइँ मन पर्दैन।
भन्छन्, 'धेरैले मलाई फरक काम गर्यौ भन्नुभयो। मलाई के लाग्छ भने फरक काम त अरूले गरिरहेका हुन्। मैले त आफ्नै वरपरका कुरा जसरी देखेँ-बुझेँ, त्यसरी नै चित्रण गर्ने प्रयास मात्रै गरेको हुँ।'
काम गर्दै सिक्दै अघि बढेका नवीन जिज्ञासु छन्। अन्तर्वार्ताहरू भेटेसम्म पढ्न-हेर्न छुटाउँदैनन्। नयाँ केही कुरा आयो कि इन्टरनेटमा खोज्ने जाँगर चलाइहाल्छन्।
पाँचथर र इलाम हुन्जेल नेपाली फिल्ममात्रै हेरेका उनले काठमाडौं आएपछि विश्व सिनेमा हेर्न थालेका हुन्। चिनियाँ निर्देशक झांग यिमोलाई औधी मनपराउँछन्। उनका लागि सिनेमा निजी अनुभूति र दृष्टिकोण अभिव्यक्ति गर्ने सुन्दर र सशक्त माध्यम हो।
नवीनलाई संसारका हरेक मान्छेको हेराइ, अनुभव वा सोचाइ पृथक लाग्छ। यसरी सोच्दा उनलाई आफ्नै कुरा पनि पृथक लाग्ने नै भयो।
'होस सम्हालेदेखि यो संसार जस्तो र जसरी देखिरहेको छु, जस्तो रुपरङ, आकृति महशुस गरिरहेको छु, त्यो अरुसँग मिल्दैन कि भन्ने लाग्छ,' उनी भन्छन्।
उनी यही पृथक अनुभूति र भोगाइ साट्न फिल्म बनाउन चाहन्छन्, अबको यात्रा फिचर फिल्म नै हो।
'नेपाली क्राफ्टमा तीनपातेमा जस्तै मौलिक र सकारात्मक सन्देश बोकेको कथा भन्ने सोच छ,' उनी भन्छन्, 'स्क्रिप्टमा काम गर्दैछु।'